Ị chọrọ chee onwe gị? | eactivo | Spanish maka kwabatara
Ezigbo na-eso ụzọ:
Lee, anyị bụ ọzọ na oge a na-enye a ngosi nke larịị A1.
Ihe a na-ejikarị ajuju ke Spain mgbe unu zutere onye? Olee otú i si egosi? Lee ndị -ajụ ajụjụ na Ibọrọ isi.
ajụjụ n'ihu si spansihenskype
Tags: Spanish , asụsụ , mba , aha , akụkọ , ọrụ
6 Comments “Ị chọrọ chee onwe gị?”
October 17, 2016 na- 14:26
Na na na Korean
M na-arụ ọrụ na Thailand maka 20 afọ
Ugbu a, m na-amụta Spanish si 3 ọnwa tupu
November 30, 2016 na- 11:18
Daalụ maka ikwu, ma ọ bụrụ na i nwere preuguntas na Spanish, anyị bụ ndị a.
June 27, 2017 na- 3:20
Chiro ịmụta Spanish.
September 11, 2017 na- 19:00
M mwute n'ihi na ịkpọtụrụ gị mbubreyo na ekele maka ikwe ka m maara na ị chọrọ ịmụta Spanish. Ị gbalịrị ihe omume na A1? Ọ bụrụ na ị chọrọ inyere, Biko, mee ka m Mara.
November 14, 2017 na- 19:36
Hi, My aha ya bụ Paola. m nwere 26 na m Italian.
November 23, 2017 na- 14:45
Daalụ maka na-edo! My aha ya bụ Delia, M Spanish ma m na-ebi Tokyo, M na-ezi Spanish na m 47 afọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inyere, dee m, ¿ndagwurugwu?
Lee gị emechaa!